ဗ ဆွေ ။ ကျော် ငြိမ်း စ ခဲ့ တယ်…ဘယ် နှစိ နှစ် ကြာ ရင်…ကုလါး တွေ ကြီး စိုး လိမ့် မယ် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« OIC ကို ကန့်ကွက်ကြောင်း ရန်ကုန်မှာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်
Malaysian Consultative Council for Islamic Organization, “OIC MEMBER STATES SHOULD RECALL ALL MYANMAR EMBASSIES” »
ဗ ဆွေ ။ ကျော် ငြိမ်း စ ခဲ့ တယ်…ဘယ် နှစိ နှစ် ကြာ ရင်…ကုလါး တွေ ကြီး စိုး လိမ့် မယ်
မန်းလေး က ညီ ဆရာ ဝန် လါ တယ်..
စ ကား ပြော ဖြစ် ကြ တယ်…
ဒီ ကိစ္စ တွေ ဘယ် တုန်း က ဘယ် သူ စ ခဲ့ လဲ ပေါ့…
ဗ ဆွေ ။ ကျော် ငြိမ်း စ ခဲ့ တယ်…ဘယ် နှစိ နှစ် ကြာ ရင်…ကုလါး တွေ ကြီး စိုး လိမ့် မယ် ဆို တဲ့ ခြောက် လုံး အောက် လမ်း နည်း တွေ စ သုံး တယ် ။
ဦး နု က ။ ဒီ တိုက် ကွက် ကို ဗမက ဖျက် သိမ်း ရေး နဲ့ တန် ပြန် ခဲ့ တယ်။
နေ ဝင်း တက် လါ တေါ့ ။ ဟို ၂ ဖွဲ့ ကို ဘယ် လို မုန်း မုန်း ကုလါး မုန်း တီး ရေး ကို မွေးစား ခဲ့ တယ် ။ ဆက် ပြီး အ ကောင် အ ထည် ဖေါ် ခဲ့ တယ်။
တပ် ရဲ့ First Column Enemy က Communist, 2nd Column Enemy က Karen, 3rd Column Enemy က Muslim ဆို တါ ကို ၁၉၇၀ ခု နှစ် တွေ က တည်း က National Defense College မှာ သင် ခဲ့ ရိုက် သွင်း ခဲ သ လို ၊ မဆလ ရဲ့ ဗဟို နိုင် ငံ ရေး တက္ကသိုလ်- ဗနတ ၊ တက် သူ တွေ အား လုံး ကို လည်း သင် ခန်း စာ မှာ ထည့် သွင်း ခဲ့ တယ် ။
နဝတ တက် လါ လည်း ဒီ Ideology က စွဲ စွဲ မြဲ မြဲ ဘဲ ။ ပို ဆိုး တါ က စစ တုန်း က အလှု ဓါးပြ တိုက် ကြ သူ ငှာ အ ဆင့် က နေ ။ သာပြန့် ဦး စီး ဌာန ဖွင့် ပြီး အံ့ မောင် ကို ညွှန် ချုပ် ခန့် ။ ဖြူး ဆရာတော် ရဲ့ ကုလါး ဆန့် ကျင် ရေး တ ရာ ရယ် ။ ဂိုအင်ဂါ ရဲ့ India က Import လူပ် လါ တဲ့ Anti Islamic Propagation တွေ ရယ် ပေါင်း ပြီး….ကောင်း ကောင်း အ ရှိန် တင် ယူ တယ် ။ လူ ထု ကို မှိုင်း တိုက် စည်း ရုံး တယ် ။ အောင် မြင် တယ် ။
အဲ တေါ့…နောက် ပိုင်း ကိစ္စ တွေ က လူ ငယ် တွေ သိ ပြီး သား ပါ ဘဲ ။
ဆို လို တါ က နှစ် ပေါင်း ၅၀ လေါက် အ မြစ် တွယ် ခဲ့ ပြီ ။
ကျုပ် တို့ တွေ က လည်း ။ ဖါ သိ ဖါ သာ ဘဲ နေ ခဲ့ တယ် ။ သူ တို့ တွေ နဲ့ ပို အ နေ လည်း ဝေး ခဲ့ တယ် ။ ရော စ ရာ လည်း မ ရှိ ဘူး လေ .စ ခါ စ မှာ တပ် ။ နောက် ပြည် ထဲ ရေး နောက် ဌာန တိုင်း လို လို မှာ Senior Officers Post တွေ ဒိ နောက် မှာ ပြန် တန်း ဝင် ရာ ထူး တွေ က အ စ မ ပေး တေါ့ ဘူး။
ခု ကောင်း ကောင်း ချည် ပြီး တုပ် ပြီး ပြီ ဆို တေါ့ ။ အ မွှေး နှုတ် ။ အ ရေ စုတ် စီ မံ ကိန်း တွေ စ နေ ပြီ ။ သူ ပုန် ထ စေ ချင် နေ တါ ပေါ့ ။ ဒါ မှ တပ် က နေ ရာ လေး တ ခု ရ မှာ ။ လူ လေး စား မှာ ။ တိုင်း ရင်း သား နဲ့ သူ တို့ မ ဖြစ် ချင် တေါ့ ဘူး ။ တ ကယ် လို့ မ ခံ နိုင် လွန်း လို့ သူ ပုန် ထ လည်း …ဘယ် မှာ လည်း…ကျော ထောက် နောက် ခံ နယ် မြေ ၊
နေ့ နေ့ ည ည …ထွက် ပေါက် စဉ်း စား ကြ ပါ ။ ဘါ ဘဲ လုပ် လုပ် ။ တ ကယ့် အင် အါး က ငွေ…ဒီ Factor အ ရေး ကြီး တယ် ။ ဗကပ ရဲ့ တန် ပြန် နည်း က တေါ့ အောက် ခြေ လူ တန်း စား ဆူ ပူ စေ တဲ့ နည်း နဲ့ ..အ စိုး ၇ ကို အ ကြပ် အ တည်း တွေ့ စေ တယ် ။ ဗမာ အောက် ခြေ လူ တန်း စား က မီး ပျက် ပျက် ။ ရေ ပျက် ပျက် သီး ခံ တယ် ။ အဲ…..ဆန် ရှား တါ တေါ့ သိပ် ထိ လွယ် တယ် ။ သီး မ ခံ ဘူး ။
၁ ။ ပြေး ကြ မ လါး ?
၂ ။ သူ တို့ ကြည် ဖြူ လါ အောင် ။ Winning their hearts and souls…ဒီ လို Campaigning တွေ လုပ် ကြ မှာ လါး ။
၃ ၊ သူ ပုန် ထ မှာ လါး….( အ ခက် ဆုံး ၊ ဖြစ် နိုင် ခြေ အ နဲ ဆုံး Option ပါ )စဉ် စား ကြ ဖို့ အ ချက် လေး တွေ ပါ ။ ဆွေး နွေး ကြည့် ပါ…စိတ် ဝင် စား ရင် ပေါ့ ဗျာ ။
This entry was posted on November 17, 2013 at 4:08 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.